गण्डकी सरकारको पहिलो कार्यकालमै फेवतालका समस्या समाधान हुन्छ ः मुख्यमन्त्री गुरुङ – Sabaikoaawaj.com
आइतवार, अशोज ११, २०७७ 11:27:54 AM	मा प्रकाशित
अन्तराष्ट्रिय पर्यटन दिवस २०७७ को अवसरमा पर्यटनलाइ उकास्न गण्डकी प्रदेश सरकारको भुमिकाका विषयमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसंग गरिएको कुराकानीका केहि अंश…..
कोभिड १९ का कारण थलिएको पर्यटनमा पुर्न जीवन दिन के गर्नुपर्छ ? केहि नयाँ तरिका सोच्नु भएको छ ?
पर्यटन कोभिड १९ को कारणले सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र भनेको पर्यटन हो । पहिलो कुरा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुनु भनेकै पर्यटनलाइ असर हो । गण्डकी नेपालको पर्यटकिय प्रदेश हो । संघ सरकार संग मौद्रिक नीती ल्याउन पहल गरेको हौ संघ सरकार संग मौद्रिक नीती सगै सरकारले घोषणा गरेको प्याकेजमा ल्याउनुमा प्रदेश सरकार सगै पोखरेलीको महत्वपुर्ण भुमिका छ । यतिवेला कोवामा पुगेको मुख्यतय पर्यटनलाइ ध्यानमा राखि कसरी बचाउने भन्नेछ । पर्यटन हाम्रो मुख्य आधार भएकोले भएकोले कृषि ,उधोग यातायात अन्य सबै व्यवसायलाइ बचाउन जरुरी छ । काम गर्दै जादा यसले पुर्नजीवनमा पाउछ र हामी समृद्धिका जान सक्छौ ।
१ अर्वको व्यवसायी सुरक्षा कोषले पर्यटन क्षेत्रलाइ कसरी सहयोग पुर्याउछ ?
पर्यटन व्यवसाय अस्तव्यस्त भएपछि वा यस क्षेत्रलाइ छोडेर सबै भाग्न थालपछि जनशक्ति जोगाउन प्याकेज हो । पर्यटन क्षेत्रमा व्यवसायीलाइ अडिक बनाइरहन व्यसायबाट विस्थापित हुनवाट रोक्न वा पुर्नजीवनमा दिनका लागी व्यवसायी सुरक्षा कोष ल्याएका हौ । यसको महत्व र ध्यानमा राखेर कार्यविधी बनाएर जानेछौ । पर्यटन व्यवसायी संग कुरा गर्छौ, मैले व्यवसायीलाइ सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर होटल व्यवसाय खोल्ने पर्ने कुरा राखेको छु । कार्यविधी बनाएर छलफल चलाउने र नगद अनुदान तिर भन्दा पनि कर्माचारी टिकाउने व्यवसायीको माग छ ।
कर्मचारीलाइ केहि महिनाको तलव दिने उनीहरुले तलव भत्ता तालिमको व्यवस्था गरि कर्मचारीलाइ टिकाइराख्ने व्यवसायीको पहल छ । व्यवसायी सुरक्षा कोषले पर्यटन क्षेत्रलाइ चलायमान बनाउन सोचका साथ ल्याएका हौ र सोहि अनुसार व्यवस्थापन हुनेछ । ठुलाले पाउने साना व्यवसायीले हेरेको हेरेइ हुने अवस्था आउने छैन् ।
गण्डकीमा प्रदेशमा ग्रामिण पर्यटन, साहसकि पर्यटन र प्रकृतिक पर्यटन र खेल पर्यटन छन् । यसलाइ अन्तराष्ट्रिय बजारमा थप के गर्दै हुनुहुन्छ ?
अन्य देशमा भन्दा नेपाल सुरक्षित छ । त्यसमा पनि पोखरा सुरक्षित छ र अन्नपुर्ण मनास्लु, धौलागिरी लगायत पर्यटन क्षेत्र झनै सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन सकियो भने पर्यटन भित्रयाउन गाहे छैन् । हामी आइसुलेशन क्वारेन्टाइनमा रुमलिएका छौ । कोभिड १९ को भ्याक्सिन नभएकोले समाधानका अन्य उपाय नहुदा संक्रमण नियन्त्रण गर्न लकडाउन गरि घरघरमा बस भनिएको हो । भ्याक्सिन निस्कियो भने सहज हुनेथियो । यस परिस्थितीलाइ व्यवस्थापन गर्न सरकार लागिपरेको छ । स्वाथ्यलाइ मध्यनजर गरि काम गर्न सबैलाइ आग्रह छ ।
फेवताललाइ विश्वमै चिनाउने नमुनाताल बनाउन यसको सौन्दर्यकरण र सिमाकंन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
संघियता आइसके पछि तिन तहको सरकार बन्यो । अहिलेसम्म फेवताललाइ कथा र चुनावको एजेण्डा बनाउने काम नगर्ने र प्रचार मात्रै गर्ने विरासत छ यसलाइ अन्त्य गर्न पर्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमै फेवतालको समबन्धि समस्या समाधान हुन्छ । हामी संघिय सरकार संग के समन्वय गर्नपर्छ तयार छौ । उसलाइ चाहिने आधार मापदण्ड बुनाएका छौ, मापदण्ड पुगेपछि हामी प्रोसेसमा जान्छौ । तालको सिमा निर्धारण गर्नु,सिमाङकन,मापदण्ड संरक्षण र विकास पछि सान्ैदयीकरण कसरी बनाउने तिर लाग्ने छौ ।
प्रदेशको राजधानी पोखरा र पोखराको पनि मृटु रहेको सुन्दर फेवताल जुन संसारको तेहै स्थानमा छ । यसलाइ हामी तेस्रो स्थानमा झार्न सक्छौ नि त, फेवतालको विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकारको पालामा देखिने खालको कामको प्रयास हुनेछ । यसरि नै फेवतालमा ढुङगा गिटी बालुवा आउने क्रम नरोकिने हो भने ताल अस्तित्व समाप्त हुन्छ । यसका लागी प्रधानमन्त्री संग कुरा भैसकेको छ उहाँ हामीले भने भन्दा र सोचे भन्दा पनि पोजेटिभ हुनुभएको मैले बुझेको छु । प्रयास सफल हुनेछ भन्नेमा विश्वास छ ।
तपाइले परिकल्पना गरेको फेवताल कस्तो हो ? कसरी तिन तहको सरकारले कसरी काम गर्छ ?
हामीले कल्पना गरे जस्तो फेवताल र अन्य वरिपरिका संरचना संरक्षण बनाउन ३० ,४० अर्वको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान मैले गरेको छु । यसका लागी संघिय सरकारको सहयोग चाहिन्छ । महानगरको मेयरजी र म गएर प्रधानमन्त्री संग कुरा राखेका छौ , फेवताल वर्षौदेखि इतिहास र कथा बोकेर बसेको छ । फेवतालको विकास र सौदर्यकरणका प्रदेश सरकारको पहल र यसको लागी प्रधानमन्त्रीको सहयोग आवश्यक छ । आवश्यक पहल र सहयोग महानगरबाट पनि हुन्छ । हामी लागिरहेका छौ, यदि यो बेलामा पनि भएन् भने कहिले हुदैन् ।
संघ सरकारले सहयोग गर्नेछ भन्नेमा हामीलाइ बिश्वास छ । यसको सहि ढंगबाट संरक्षण व्यवस्थापन र सौन्दयीकरण गर्न सकियो भने पोखरामा ५०, ६० लाख पर्यटक भित्रयाउन सकिन्छ । आइटी पार्क, शिक्षा, स्वाथ्य, अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल ,प्याराग्लाइडिङ,केवुलकार लगायतका पर्यटक भित्रीने माध्यम धेरै छन् । आइटि पार्क पोखरामा हुनपर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ । गण्डकी प्रदेशमा प्राधिकरण नियम बनेकोले यसमा बिदेशी लगानी बातावरण बनेको छ ।
हिमागृह र रत्नमन्दिर खोल्ने विषयमा धेरै कुराहरु आए, अब कहिले खुल्छ ?
पर्यटन व्यवसायीले यसलाइ खोल्न जोड गरेपछि हामीले कार्यदल बनाएका छौ । यसलाइ टुरजिम संग जोडेर नेपालट्रष्ट अन्र्तगतका जग्गालाइ संरक्षण लगायतका काम आर्थिक वर्षमा गर्नेछौ । हिमागृह र रत्नमन्दिर खोल्नेछ । संघिय सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीतीको सर्मथन सबैले गरेका छन् । १, २ वर्षमा टुरिजम पुरानै लयमा आउने विश्वास लिएको छु । कृषि, उद्योग लगायतका राहत प्याकेजले पनि सहयोग हुनेछ । बैकले मापदण्डको कुरा लिएर पर्यटन व्यवसायीलाइ तनाव दिने गरेका छन् । तर म व्यावसायीलाइ के भन्न चाहान्छु भने हरेक समस्याको समाधान हुन्छ । जोस र जाँगरलाइ यथावत राखि निराश नभैकन सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर उत्साहका साथ लाग्नु होस् प्रदेश सरकार तपाइको साथमा छ ।
प्रकाशित मितिः आइतवार, अशोज ११, २०७७ 11:27:54 AM